Pumplọ ọrụ mgbapụta ọzọ - China Ndị ọzọ na-emepụta mgbapụta, ndị na-eweta ya
Site na nguzogide abrasion pụtara ìhè na arụmọrụ dị elu, KXZ usoro slurry pump dabara adaba maka njem nke ihe ndọtị abrasive dị ka ore slurry na osisi na-ere ọkụ. A na-ejikarị ya eme ihe na Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, coal, ike eletrik, ihe owuwu ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ọgwụ, nchekwa mmiri na ubi ndị ọzọ.
KZJ usoro ngwaahịa na-ọtụtụ-eji nkà mmụta banyere ígwè, ígwè mills, unyi nkwadebe, ore beneficiation, alumina na flue gas desulfurization oru na elu usoro. Ọ na-bụ-eji ibufe abrasive slurry nwere siri ike ahụ, dị ka nri mgbapụta nke m, ndị njem nke dị iche iche ụtụtụ, tailings, mwepụ nke slag na ike osisi, mwepụ nke slag na ígwè osisi, na njem nke unyi slime na osisi nkwadebe coal, nnukwu mgbasa ozi, wdg. Ibu ịdị arọ nke slurry nwere ike iru 45% nke ngwa agha na 60% nke slurry ore.